Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI
Yakapedzisira Kugadziriswa pane June 29, 2020
LB inopa Nhoroondo Yese yeBhola Genius inozivikanwa nemazita ekuda "Wee Man, Ryzi". Yedu Ryan Fraser Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yake, dzidzo / basa rakagadzirwa, mararamiro epakuvamba, mararamiro ekurumbira nyaya, kukwira mukurumbira nyaya, hukama hwehukama, hupenyu hwehupenyu, hupenyu hwemhuri, uye mararamiro echokwadi nezvimwewo.
Ryan Fraser Utano Nyaya- Kuongorora. Chikwereti kuna EveningExpress, DailyRecord uye PremierLeague
Hongu, munhu wose anoziva Fraser kune werinha yekare yeScottish uye chinangwa kubatsira munyanzvi. Zvisinei, ruoko ruduku kune vateveri vemahombekombe vanofunga Fraser's Bio iyo inofadza zvikuru. Iye zvino pasina kunze kwekudaro, ngatitangei.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Ryan Fraser akaberekwa musi we 24th waFebruary 1994 kuna amai vake, Debbie Fraser nababa, Graeme Fraser mumugwagwa weAberdeen, kuchamhembe kweEcosland, United Kingdom. Vanhu veScott vane rudzi uye rudzi rwakachena rwakaberekwa semwana oga kune vabereki vake.
Ryan Fraser anobva kumunhu anozvininipisa, wepamusoro-kati-mumhuri uye mumisha yemitambo. Sei Kutamba Kwemusha? nokuti amai vake vaimbova 100 mamita sprinter avo vaimiririra Scotland pamusoro pemitambo yevamwe.
Ryan Fraser akapedza makore ekutanga ehupenyu hwake muAberdeen, kuScotland asati aenda nevabereki vake kuOman, kuMiddle East nyika apo baba vake vakawana basa sevashandi vekumahombekombe, TheScottishSun mushumo. Baba vaRamme Graeme Fraser pavakawana basa rekuma-kumabvazuva kwemafuta vakaita chisarudzo chekutamisa mhuri yavo yose.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Dzidzo neKubata Buildup
Mafambiro Akaita Bhodhi:
Apo Ryan Fraser aigara muOman pamwe nevabereki vake, akava nebhora uye zvose zvaaiita zvakanga zviri kungozvirova. Akanga asingazivi kuti akanga achivaka tarenda kubva mairi. Ryan haana kungokanda bhora rake chete, akadzidza kuparadzanisa nayo. Iyi ndiyo yaiva nguva yekujekesa mazita edzimai ake akatanga kuratidzwa mumutambo kana vabereki vake vaifarira pakutanga.
Kutaura nezvechimiro, Fraser akamboratidzwa pahuduku hwake achiti; "Amai vangu nababa havanyatsoda bhora, saka handizivi kuti ndakapinda sei"Zvichida sezvo vakaona mwanakomana wavo ari nani mumutambo uyu wakaita kuti varege kungozvifarira, asi vachiita chisarudzo chekupedzisira kudzokera kunyika yavo.
Apo baba vaRyan Fraser vakaziva kuti mwanakomana wavo akanga akanaka pane bhora, akasarudza kurega basa rake rakawanda remafuta zvose muzita rekudzokera kuAberdeen. Vechiduku Fraser vaiva 10 panguva iyo mhuri yavo yakasarudza kumubatsira kutevera kurota kwake kwekuve muteja.
Kunyangwe zvakanga zvakaoma kuti Graeme asiye basa rake rokunze uye Debbie kuti agadzirise kubhadhara kubva kuAtletics, zvisinei, vabereki vakanaka vakasarudza kuramba vachirarama hope dzavo kuburikidza nemwanakomana wavo.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Kuronga kwemhuri yaRyan Fraser kwakabhadhara zvikamu zvaro sezvo vakaona Ryan muduku achisarudzwa pakati pevana vakabudirira vakange vapedza miedzo neKincorth soccer academy iri muAberdeen, Scotland.
Kuzobvumirwa kupinda muchechi yepamusoro yakange iri furefu refu, iyo iyo yakanyatsobhadhara. Sezvo Ryan akaramba achikura, akazviona achigadzirisa hupenyu hupenyu neChikami. Pakutanga mubasa rake, zvakava zvakajeka kuti wechidiki Fraser akanga atora mai vake majaya ekukurumidza. Fraser akanga ari muduku uye mwana akakurumidza kupinda muchikoro.
Ryan Fraser, kurudyi, mukuita panguva yake yekutanga yemasazuva. Chikwereti MadekwanaExpress CO.UK
Ryan Fraser akabva Kincorth Academy pazera re 16 mushure mekusaina kontrakiti naAberdeen FC. Sezvo Ryan Fraser akapfuurira kukura, akazviona achigadzirisa zvakanaka muupenyu neChikami. Akaita vanoita sevanopfuurira mberi kuburikidza nemasangano ezera remakore, vachiwana kuvimba kwevadzidzi vake vechidiki.
Gore 2010 akaona Fraser achipiwa mukana wekutamba mumutambo mukuru weAberdeen uko akaramba achimira mumitambo yake. Fraser akakurumidza kufungidzira muchechi yekutanga yeAberdeen munguva yekutanga kwe2012-13 Scottish Premier League gore. Izvi zvakamupa iye Young Player weMwedzi mubayiro weSeptember neOctober 2012.
Ryan Fraser Kutanga Nhau Yenyaya. Chikwereti Daily Record.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Apo Going Got Tough:
Kubwinya kwaRyan Fraser kunoshamisa kwakava chikonzero chekuenderera mberi nekugumburwa uye dambudziko kune vanopikisa. Mamiriro ezvinhu akabuda kunze kwekuti Aberdeen's meneja Craig Brown aifanirwa kuratidza kushushikana kuti zvikwata zvinopesana zvaive zvakananga Fraser nemateki akaoma.
Kutevera zvipingamupinyi, Fraser akasarudza kuramba chibvumirano chebvumirano netariro yekuenderera mberi kwebhola rake kumaodzanyemba kuEngland. Iri sarudzo rakasangana nevarwi veAberdeen vasina kuita zvakaipa.
Zvakaoma Kutanga Kuupenyu pa ACF Bournemouth:
Mugwagwa waRyan Wokurumbira Nhau- Apo Going Inowana Tough. Chikwereti tauraSPSPORT
Kukuvadza kwakakomba kwamabvi kwakatora pachikamu chake chekutanga chekudzidzisa kwakadzivisa zvakanyanya kufambira mberi kwaFraser kuBournemouth. Zvakanga zvakaoma zvakanyanya kuti Ryan atakure pane kushungurudzwa kwakaitwa iye nevemhuri yake kubva kune vaimbova vatevedzeri veAberdeen vasina kufara nekuenda kwake.
Achitaura nezvezvakaitika, Fraser akamboti: "Zvakanga zvakaoma kubata nemisarudzo yangu yokutora yakazoipisisa pandakaenda ndikakuvara pakarepo. Vhiki mbiri pakufamba, ndakanzwa sokuti ndakasarudza zvakanaka, asi isu nemhuri yangu takagadziriswa ". Pane imwe nguva Ryan Fraser akawana tweets uye mharidzo, iyo yakanga yakanyanyisa uye yakakodzera kusaita.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Kumuka Mukurumbira Nhau
Pasinei nokutanga kwake kunotyisa kuBournemouth uye kushungurudzika kwakaramba kuchikandwa, Fraser aigara achigutsikana kuti akanga aita chisarudzo chakanaka mukusarudza kwake kuenda kumaodzanyemba. Akasarudza kuita kuti ataure pamusoro pehutano kunze kwekuteerera kune zvaaimbova vateveri vake vaiti pamusoro pake uye nemhuri yake. Maererano naScott, "Kana vamwe vanhu vachiri kufunga kuti ndakaita chisarudzo chisina kururama, zvakakwana zvakakwana. "
Nguva yekukuvara yakava nguva yekufungisisa kwakasimba kwaRyan Fraser uyo akambotaura mumashoko ake; ...
Ryan Fraser Mugwagwa wekudzoka kubva mukukuvara. Chikwereti AFC Bournemouth.
"Nekukuvadza, handina kutamba nguva yakawanda mumwaka wangu wokutanga, asi ndakanzwa mukati mangu kuti ndaikura semutambi. Paiva nezvinhu mumutambo wangu zvandakanga ndisinganyatsonzwisisi. Yaiva nguva iyo ndakatanga kuziva mutambo mukati. Ndakadzidza nguva yekuita zvinhu, nguva yekuyambuka bhora, nguva yokupinda mukati, nguva yekugara yakafara. "
Kwapera mushure mekukuvara, hazvina kutora nguva Ryan asati atanga kubudirira kumaodzanyemba kwegungwa. Izvi zvakamuona achiwana rumbidzo yakawanda nokuda kwezviratidzo zvake zvinoshamisa. Ryan Fraser akapfuurira kubatsira boka rake kuti rikunde 2014 / 2015 Football League Championship.
Ryan Fraser Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau
Senguva yekunyora, Ryan iye zvino akasimbiswa kwazvo muLigian Premier League pasi peEddie Howe. Mutambo we 2018 / 2019 wekutanga wekutanga wakamuona achiva mubatsiri mambo weBournemouth. Kunyange zvakadaro panguva yekunyora, Fraser iri kutaridzirwa kuti ndiyo inonyanya kubatsira mubatsiri shure Eden Hazard uye Christian Eriksen.
Nhasi, nyika yakaona kuti chisarudzo chakashinga uye chakatsoropodzwa chakanga chaita kuti kuve nekukwira kunoshamisa uye zvakare kuenzanisa nharo dzechikwata chake. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Ndivanaani Ryan Fraser Girlfriend kana Wag?
Ndiina Ryan Fraser akasimuka mukurumbira, mubvunzo pamuromo wevanhu vose ndewe ...Ndiyani musikana waRyan Fraser kana WAG?. Kukanganwa kukwirira kwake, hakuna kukanganisa chokwadi chokuti Ryan Fraser ane unhu hunofadza, nekutarisa kwakanaka uko chokwadi chinomuita muzambiringa wakaisvonaka kuvasikana.
Zvisinei, maererano nemitauro yakawanda yeInternet, inoratidzika saRyan Fraser inoratidzika seisina kuroora kana panguva yekunyora. Kunyange zvakadaro, tiri kufunga kuti angave ari muukama asi anosarudza kusaita kuti zvive pachena kuvanhu panguva ino.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwehupenyu hwaRyan Fraser huchakubatsira iwe kuti uite mufananidzo wakazara pamusoro pake. Buda kubva mubhoza, Ryan Fraser anorarama hupenyu hune hutsika uye hunozvininipisa hupenyu hwepakati.
Kunyanya zvakadaro, pahupenyu hwake hwehupenyu, Ryan Fraser chikamu chekutanga. Anosarudza kuchengetedza ruvara rwakasimba pamutambo wake uye, saka, anorega kutaura nezvehupenyu hwake pachedu. Izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kuti vhidhiyo vatarise zvakawanda pamusoro pake.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Akasati atanga kusvika mubhola, Ryan Faser mhuri yakanga yakapfuma zvakakwana kuti iwane mari ye $ 100,000 (mafuta mushandi wegore rega rega mubairo) negore nemitambo yekubvisa mari kumudzimai wake. Zvisinei, pakutanga kwechikamu chino, zvakaratidzika kwete mutezo wese wemhuri yaRyan Fraser aida mitambo kubvira pakutanga.
Waizviziva here? Mukadzi waFraser ainzi Debbie aimboenda kumakwikwi eOlympic, asi akazogumburwa nemabvi akagumisa basa rake. Pasinei naDebbie kuva kwenguva yakareba kubvira paakaenda kumusha kubva kumitambo, iye kamwe akangobuda kunze nemwanakomana wake wepamusoro-soro pavakange vane mamiriro akasiyana. Kutaura pamusoro pazvo, Ryan akamboti;
"Mai vangu vari kukurumidza kupfuura ini - zvakakurumidza zvikuru! Akakuvadzwa panguva iyoyo, asi isu tine pfuti mumugwagwa uye iye aizoramba achindirova. Iye muduku kudarika ini asi akakurumidza! "
Pasinei nokupa maamai ake akawanda, Fraser aizotenda nokusingaperi nekuda kwebaba vake vakaita chibairo ichocho chikuru chekusiya mari yake yokubhadhara mafuta emabasa ake. Vose Graeme Fraser vaida kuti mwanakomana wavo atambe nhabvu uye aise pfungwa dzake pane izvozvi kunyange nechinangwa chezviroto zvake.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- LifeStyle
Fraser sezvakaitika panguva yekunyora ine kukosha kwekodhi ye £ 16.20m maererano TransferMarket Taura. Zvisinei, izvi hazviperi kune a Upenyu Hwakasvibira hunoonekwa nyore nyore nezana shoma dzemotokari, dzimba huru, vasikana uye buzz. Ryan Fraser anosarudza kushandisa mari yake yekubhadhara gorofu.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
Ryan Fraser akambove akapindwa muropa nePizza uye Ice-Creams, zvichida chinokonzera matambudziko ake okutanga okukuvadza. Eddie Howe akambomubvumira kusiya Pizza uye Ice-Creams maitiro kune vamwe kuti atore chirongwa chekudya zvakanaka. Kudya kudya kwakakwana kwakamuita kuti arwise kushanda kwakasimba uye kushungurudza kwakanyanya kunowanzovhiringidzwa nevadziviriri.
Ryan Fraser ndeyevo vashomanana vemahosi avo vave vari chikamu chekuonekwa kweTV. Waizviziva here ?.... Akanga ari mutambi wemuwonesi wemutambo "Bhora pa 5: The Championship".
Pamusoro peHumambo hwake:
Ryan Fraser- The Shortest player muNational Premier League. Chikwereti kune DailyMail
Zvichimirira chete 5ft 4ins, Fraser iye zvino ndiye mutambi muduku kuduku-shanduro dzekuChirungu sekunguva yekunyora. Pasinei nehupamhi, nyeredzi duku yakaita hukuru hukuru muhurumende yekutanga.
Ryan Fraser Utano Nhau Plus Untold Biography Facts- Video Summary
Ndapota ona pasi apa, chidimbu chemuvhidhiyo cheYurovheni cheporofita iyi. Nzwirai mutsa uye nyora kune yedu Youtube Channel kune mamwe mavhidhiyo.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Ryan Ryan weChibvumirano Chehuduku hwevana pamwe ne Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Dele Alli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Jermain Defoe Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Ethan Ampadu Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Michael Keane Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts